ONN Qophii Addaa : Giddugaleessa Oromiyaatti jimilaan hidhaan heeddummaachuun wal – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosONN Qophii Addaa : Giddugaleessa Oromiyaatti jimilaan hidhaan heeddummaachuun wal
ONN Qophii Addaa : Giddugaleessa Oromiyaatti jimilaan hidhaan heeddummaachuun wal
ONN LIVE: https://youtu.be/keKb6SE_160 ONN Qophii Addaa : Giddugaleessa Oromiyaatti jimilaan hidhaan heeddummaachuun wal qabatee marii Ajaja WBO Zoonii giddugaleessaa J/Sanyii Nagaasaa ,jiraatota aanaalee garaagara komii kaasan, Qeerroo magaalaa Amboo , aangawwan mootummaa waliin taasifame. Adooleessa 07/2019
Wayita Qeerroon Bilisummaa Oromoo, kaabaa kibbaa, Bahaa Dhiyaa fi giddu-galeessaa tokkommaan mootummaa EPRDF kan qawwee hanga funyaaniitti hidhate dura dhaabbatanii falman sana OPDOn uummata waamtee ,” ABO tu duuba jira, ABOn goolessituudha; ijoollee keessan gorfadhaa, ta’uu baannaan ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhachuuf dirqamna..kkf” jechaa turte. Tibba sana ilmaan OPDO ykn mana taa’u ykn waan Qeerroon hojjetu basaasanii tika OPDO/TPLF/EPRDF tti gabaasu ture.
Qabsoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO wal-utubee Mootummaa EPRDF raase. Kanumaan warri TPLF kaardii isaanii ishee guyyaa rakkoof ol-keewwatan taphatan. Kan mootummaa isaanii kokkee qabaa jiru Qabsoo Bilisummaa Oromoo waan ta’eef OPDOtti aangoo dabarsanii yoo kennan kasaaraa malee maquu (free exit) akka danda’an walga’ii isaanii baatii tokkoof taa’an irratti murteessan. Yaada murtee isaanii hubachuun ykn ajaja isaan itti kennaniin H/Maaram fedhiin akka gadhiise labse. Isa booda walga’ii EPRDF godhanii Abiyyi Ahmed filatan. OPDO keessaa filachuun filannoo osoo hin taane dirqama ture. Gaaffii Oromoo dhiibee dhufe qabbaneessuuf OPDO keessaa Muummicha Ministirootaa filatanii “ kunoo Oromoon MM ta’e kana caalaa maal barbaaddu “ jedhan. Warri TPLF, OPDOn ammoo bulchuu akka hin dandeenye waan beekaniif ishee waliin joonja’uu hin barbaanne Tigiraayitti deebi’anii qodaqodaa Abiyyi Ahmed fa’aa taphatan taa’anii dawwaachuutti galan.
Karoorri TPLF sun 100% hojjeteera. Tokkoffaa,Fincilli Qeerroo Bilisummaa Oromoon gaggeessamaa ture sun dhaabbateera. Lammaffaa akkuma isaan herregan Oromoon, “Oromootu Muummicha Ministeera ta’e, mootummaa keenyatu dhufe” jedhee salphaadhumatti gowwoome. TPLF kanuma Yaadanii Abiyyi Ahmed ykn OPDO aangootti fidan; kanumatus ta’e.
Kan nama aarsuu fi gubee nama waxalu Garuu OPDOn deebitee Qeerroo Bilisummaa Oromoo isuma aangootti ishee fide sana itti galagaltee diina godhachuu isheeti. OPDOn, Oromoon akka ABO jaallatu utuma beektuu ABO fi Oromoo walirraa kutuuf hojjechuutti gadi teesse. FDG fi FXG kan gaggeessaa ture Qeerroo Bilisummaa Oromooti; Jaarmiyaa kana kan hundeessemmoo ABOdha. OPDOn kana ta’uusaa hin beektu taanaan siyaasa biyya sanaa keessa hin turre jechuudha. Maaltu akka deemaa ture Geetaachoo Asaffaa gaafatanii baruu qabu. Yoo OPDOn fincila ta’aa turee fi gumaacha Qeerroo Bilisummaa Oromoo beekti ta’ee fi gumaacha ABO ni hubatti ta’e ammoo ABO waliin hojjechuu malee ABO dhiibuun akka ishee hin baasne beekuu qabdi ture. OPDOn, ABO waliin hojjechuuf carraa argachuu ishee akka lotoriitti lakkaa’uu qabdi ture. Kun ta’uu baannaan Deeggarsaa fi jaalala ABO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti qaban hubattee akkuma TPLF tarkaanfii ofirratti fudhachuun abshaalummaadha ture. Galagaltoo isaa ABO fi WBO balaaleffachuu fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti guuruu; miseensotaa fi deeggartoota ABO ajjeesuu, hidhuu fi doorsisuutti gadi teesse. OPDOn yoo akkasiin itti fufte akka TPLF “free exit” gochuufillee carraa waan argattu natti hin fakkaatu.
Amboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e! https://t.co/rYO1fVj7ES pic.twitter.com/Qf1knYxkvR
— Kichuu (@kichuu24) July 7, 2019
OBN Waxabajjii 29, 2011 – Kora hayyoota Oromoo Magaalaa Adaamaatti har’a taa’ame.
Korri hayyoota Oromoo nageenyaafi misoomarratti xiyyeeffatu Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti taa’e jira.
Hayyu Seenaa Dr Gammachuu Magarsaa waan bayye irraa hubattan jadhen abdadhaa itti dhiyaadhaa
SMN Facebook Live July 07,2019.
Pilipiins: RECORD-ADDUNYAA-sa’aatii tokko Keessatti Biqiltuu Mukaa Miiliyoona 3
ONN: የአገው ቅማንት ልዩ ፕሮግራም